NIC Problem — MYSTERY ZILLION
ကျနော်စက်၂လုံးကိိုnetwork ချိတ်ပါတယ်။သေချာပြောရရင်ပထမစက်တလုံးမှာ NIC ၂ကတ်စိုက်ထားပါတယ် တကတ်ကို ADSL MODEM ကလာတဲ့ network ကြိုးကိုထိုးထားပါတယ်။နောက်တကတ်ကိုကျတော့နောက်စက်တလုံးကို network လှမ်းချိတ်ပါတယ်။အဲဒီcable ခေါင်းက cross ညှပ်ထားတာပါ။ခုပြသာနာတက်နေတာက ကျနော်က ICSလုပ်တာမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့NIC ၂ကတ်မှာနောက်တလုံးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ Network cable ကိုဖြုတ်မှသာ ADSL connection ကတက်ပါတယ်။စက်၂လုံးကိုNIC လဲပြီးတပ်ကြည့်လဲမရပါဘူး။အဲလိုပဲ network cable ဖြုတ်လိုက်မှ internet connection တက်ပါတယ်။နှစ်ခုတပြိုင်နက်ထဲအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ကျနော်က ICS လုပ်ချင်တာဆိုတော့ network ချိတ်မရရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ။ဒါမမဟုတ်ကျနော်ထဲ့ထထားတဲ့ IP တွေကဘဲမှားနေလို့လား။ip တွေကိုဒီလိုထဲ့ထားပါတယ်။
Subnet mask-- MPT မှပေးသည့်အတိုင်း
IP adress -192.168.1.1
Default Gateway- 192.168.1.2
Ip adress -192.168.1.2
Default Gateway- 192.168.1.1
Computer A ရဲ့ second NICနဲ့ Computer B နဲ့ချိတ်ထားတာပါ။စိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာသိရင်ဝင်ဆွေးနွေးကြပါဦးဗျိူ့၊:((:((:((:((:((
ခင်ဗျား ။။။။။ second NIC ကို ပေးတာ မှားနေတယ် ....မပေးကဘူး ICS လုပ်မယ်ဆိုရင်
Second NIC ကို မပေးနဲ့ ဒီအတိုင်း DHCP ထားလိုက် ....
MPT ကလာတဲ့လိုင်းကို ip ရတာနဲ့ ..... internet connection share ပေးလိုက်
ဒါဆို second NIC က auto 192.168.0.1 လား 192.168.1.0 လားမသိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် .
192.168.1.0 ဖြစ်မယ်နဲပတူတယ် may be နော် 192.168.1.1 ဖြစ်မယ် .... အဲဒါဆို ဒုတိယ computer ကို DHCP လှမ်းတောင်းလိုက်
အိုကေပဲ Gate way က 192.168.1.1 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
အဲဒါဆို ဒုတိယ computer ကို dhcp လှမ်းတောင်းလိုက်
Definition of DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol )_ DHCP is allowingacomputer to join an IP-based network without havingapre-configured IP address. And it isaprotocol that assigns unique IP addresses to deliver TCP/IP stack configuration parameters such as the subnet mask and default router, and to provide other configuration information such as the addresses for printer, time and news servers, then releases and renews these addresses as devices leave and re-join the network. DHCP ဆိုတာinternet protocol ပါ ပဲ။TCP/TP ကိုသုံးပြီးcomputers တွေကို automatic config လုပ် ပါ တယ် ။
တို cyberhack ပြောတလို ပဲ second NIC ကို ip ပေးထားတယ် တယ်။ မပေးပဲfirst NIC ကနေ connection share ပေးကြည်လိုက် ။ ok တွားမှာပါ:)
connection က ၂စက်လုံးတက်ပါပီ။ပီးတော့ကောဘာလုပ်စရာလိုသေးလဲဟင်။wingate တို့winproxy လိုsolftware တွေလိုသေးလားဟင်။လိုတယ်ဆိုသုံးနည်းလေးပါပြောနော်:D:Dမသုံးတတ်လို့